“မျက်စေ့အေး နားအေး” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » “မျက်စေ့အေး နားအေး”	7
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Nov 3, 2015 in Photography, Travel |7comments
ဖြူ ပြာ စိမ်းနွယ်
Kaung Kin Pyar says: အပေါ်ကလို ရေစပ်စပ်လေး မြင်ရင်တော့ ကိုယ်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ဖြစ်နေကျ ကျွတ်တွေရှိမှာနော်လို့ သွားသွားတွေးမိတယ်…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲ့ဘက်ကတော့ ကျွတ်တွေမျှော့တွေမရှိလောက်ဘူးထင်တာပါဘဲ
kai says: စိန့်ပြည်က.. လူဦးရေကိုပေါက်ကွဲခွင့်ပေးလိုက်ပြီမို့…
သိပ်မကြာတဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ… လူသားတွေဟာ….. အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ.. မျှော့တွ.. စားကြရလိမ့်မယ်…
မိခင်သဘာဝနဲ့ကမ္ဘာကပေးနိုင်တဲ့.. စားရေရိက္ခာပမာဏကို.. လူသန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတွေက… စားသုံး…သုံးစွဲမှုလွန်ကုန်ပြီလေ….။
စိမ်းမြမြလေးတွေ.. ကြည့်ထား… ကြည့်ထား…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: စိတ်ချပါကိုခိုင်ရေ
သဘာဝ ကြီးက အလိုလို ညှိုနိူင်းပေးပါလိမ့်မယ်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ (ရေကြီး မီးလောင် မြေပြို)ဖြစ်မယ်
ရောဂါတွေထူပြောလာမယ် သူ့ အလိုလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်
Mike says: .ရင်ထဲစိုးရိမ်စိတ်များနဲ့ ပူလောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ စိုစိုစိမ်းစိမ်မြင်ရတော့ အမှန်မျက်စိအေးပါတယ်
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်ကတော့ အခုလောလောဆယ်…. အဲ့လို လူသူကင်းဝေးတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်လို…လွင်ပြင်ကျယ်လို နေရာတွေဆီသွားပြီး….
ဝီစကီတစ်ခွက်လောက် သောက်…. မူးယစ်ရီဝေလာတဲ့အခါ… ခံစားနေရသမျှမွန်းကျပ်မှုတွေ..အဆင်မပြေမှုတွေ…
နာကျင်မှုတွေအကြောင်း…တစ်ထိုင်တည်း..ေ.တွးတွေးင်္ပြီး…အားရပါးရ ငိုချပစ်လိုက်ချင်နေတယ်… ။
ငိုလို့ဝတဲ့အခါ… ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ခင်…ဘာမှ မလုပ်ခဲ့သလိုမျိုး… ဘာမှ မဖြစ်ပျက်ခဲ့သလိုမျိုး…
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာကို ပြန် ဝင်…. တိတ်တိတ်ကလေး…ငြိမ်သက်နေလိုက်ချင်တယ်…
အခုတော့…. အဲ့လို မဖြစ်နိုင်တဲ့…မြို့ပြ….မွန်းကျပ်မှုနဲ့အတူ…မွန်းကျပ်လို့…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မြို့ပြကို မွန်းကျပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီကနေ ခွဲထွက်ပြေးဘို့တော့ ခက်တယ်နော်